Maitiro Ekutora Ekufunga Akanangana neAI Anoderedza Pasi paakasarudzika Dhata Sets | Martech Zone
Matorero Ane Hungwaru Maitiro kune AI Inocheka Pasi PaBiased Data Sets
Mugovera, October 23, 2021 NeChishanu, Gumiguru 22, 2021 Ahmer Inam
AI-powered mhinduro inoda data seti kuti ishande. Uye kusikwa kweiyo data seti kwakazara nedambudziko rakajeka rekurerekera pamwero wakarongeka. Vanhu vese vanotambura nekusarura (zvese kuziva uye kusaziva). Iwo rusaruro runogona kutora chero huwandu hwemafomu: geographic, mitauro, hupfumi, hupombwe, uye rusarura. Uye iwo akasarudzika akasarudzika akabikwa kuita data, izvo zvinogona kukonzeresa zvigadzirwa zveAI zvinowedzera nekusimudzira kusarura. Masangano anoda nzira ine hungwaru kudzikisira kupesana nekukambaira kupinda mumaseti edata.
Mienzaniso Inoratidzira Dambudziko Rekusarura
Mumwe muenzaniso unozivikanwa weiyi data yakatarisana nesarudzo iyo yakaunganidza yakawanda yakashata mhanya panguva iyoyo yaive mhinduro yekutangazve yekuverenga iyo yaifarira vavhoti vechirume pamusoro pevakadzi. Izvi zvinodaro nekuti seti yedhata yedhisheni yakagadziridzwa pachishandiswa patsva kubva mumakore gumi apfuura apo ruzhinji rwevakanyorera vanga vari varume. Iyo data yaive yakarerekera uye mhedzisiro yairatidza kurerekera ikoko.
Mumwe muenzaniso unoshumwa zvakanyanya: Pamusangano wepagore weGoogle I/O wevagadziri, Google yakagovera ratidziro yeAI-powered dermatology yekubatsira chishandiso chinobatsira vanhu kunzwisisa zviri kuitika nenyaya dzine chekuita neganda ravo, bvudzi, uye nzara. Mubatsiri wedermatology anosimbisa mafambiro ari kuita AI kubatsira nehutano - asi yakaratidzawo mukana wekuti rusaruro rupinde muAI zvichitevera kushoropodzwa kuti chishandiso hachina kukwana vanhu vane ruvara.
Google payakazivisa chishandiso, kambani yakati:
Kuti tive nechokwadi chekuti tiri kuvakira munhu wese, modhi yedu inoverengera zvinhu zvakaita sezera, bonde, rudzi, uye marudzi eganda - kubva paganda rakachenuruka risingatsveki kusvika kune rebrown ganda risingawanzotsva.
Google, Uchishandisa AI kubatsira kuwana mhinduro kune akajairika mamiriro eganda
Asi chinyorwa muVice chakati Google yakundikana kushandisa inosanganisirwa data seti:
Kuti vaite basa iri, vatsvakurudzi vakashandisa dataset yekudzidzisa yemifananidzo ye64,837 yevarwere ve12,399 vari mumatunhu maviri. Asi pazviuru zvemamiriro eganda akafananidzirwa, 3.5 muzana chete yakabva kuvarwere vane Fitzpatrick ganda V uye VI-avo vanomiririra ganda rebrown uye dema dema kana dema, zvichiteerana. 90 muzana yedhatabhesi yakaumbwa nevanhu vane ganda rakanaka, dema chena ganda, kana ganda rakapfava, maererano nekudzidza. Nekuda kwekusarura sampling, dermatologists vanoti iyo app inogona kupedzisira yapfuura- kana pasi-kuongorora vanhu vasina kuchena.
Vice, Google's New Dermatology App Haina Kugadzirirwa Vanhu Vane Ganda Rakasviba
Google yakapindura ichiti ichanatsa chishandiso isati yachiburitsa zviri pamutemo:
Yedu AI-powered dermatology kubatsira chishandiso ndiko kupera kweanopfuura makore matatu ekutsvagisa. Sezvo basa redu rairatidzwa muNature Medicine, takaenderera mberi nekugadzira uye kukwenenzvera tekinoroji yedu nekubatanidzwa kwemamwe dhataseti anosanganisira data rakapihwa nezviuru zvevanhu, uye mamirioni emamwe akachengetedzwa ganda ane hanya mifananidzo.
Zvakawanda sekugona kwedu kutarisira AI uye michina yekudzidza michina inogona kugadzirisa izvi zvisizvo, chokwadi chinosara: ivo chete se ngwara sezvo data seti yavo yakachena. Mukuvandudza kune yekare programming chirevo marara mu / marara kunze, AI mhinduro dzakasimba chete sehutano hwe data seti kubva pakuenda-kuenda. Pasina gadziriso kubva kune vanogadzira mapurogiramu, aya ma data seti haana ruzivo rwekumashure ekuzvigadzirisa - sezvo ivo vasina imwe chimiro cherevo.
Kuvaka data rinoisa zvine mutsigo kuri pamusoro wezvose etsika artificial intelligence. Uye vanhu ndivo vari musimboti wemhinduro.
Mindful AI ndeyeEthical AI
Bias hazviitike mune yekushambadzira. Asina hunhu kana akasarudzika data seti anouya kubva pakutora isiriyo nzira panguva yekuvandudza nhanho. Nzira yekurwisa kukanganisa kukanganisa ndeyekutora nzira, yakatarisana nevanhu, nzira iyo vazhinji muindasitiri vari kudaidza Mindful AI. Kungwarira AI ine zvinhu zvitatu zvakakosha.
1. Kungwarira AI ndeyeMunhu-Akavakirwa
Kubva pakavambwa chirongwa cheAI, mumatanho ekuronga, zvinodiwa nevanhu zvinofanirwa kunge zviri pakati pechisarudzo chose. Uye zvinoreva kuti vanhu vese - kwete chete subset. Ndosaka vanogadzira vachifanira kuvimba nechikwata chakasiyana-siyana chepasi rose-chakavakirwa vanhu kuti vadzidzise maAI mafomu kuti ave anosanganisira uye asina rusarura.
Crowdsourcing iyo data seti kubva kune yepasirese, timu yakasiyana-siyana inoita kuti kusarura kuonekwe uye kusefa kare. Ivo vemarudzi akasiyana, mazera, vakomana, dzidzo mazinga, mamiriro ezvehupfumi nehupfumi, nenzvimbo vanogona kuona nyore nyore maseti e data anofarira imwe tsika pane imwe, nekudaro vachibvisa rusaruro rwusina kutarisirwa.
Tarisa uone kunyorera kwezwi. Pakushandisa yekufunga AI nzira, uye kushandisa simba repasi rose tarenda dziva, vagadziri vanogona kuverenga zvemitauro yezvinhu senge akasiyana madimikira uye maaccents mune data seti.
Kugadzira dhizaini yakatarisana nemunhu kubva pakutanga kwakakosha. Inoenda kure kure kuve nechokwadi chekuti data rakagadzirwa, rakarongedzwa, uye rakanyorwa rinosangana netarisiro yevashandisi vekupedzisira. Asi zvakakoshawo kuchengeta vanhu vari muchiuno mukati mehupenyu hwese hwekuvandudza chigadzirwa.
Vanhu vari muchiuno vanogona zvakare kubatsira michina kugadzira iri nani AI ruzivo kune yega yega vateereri. PaPactera EDGE, edu AI data projekti zvikwata, zviri pasi rose, zvinonzwisisa maitiro akasiyana uye mamiriro anogona kukanganisa kuunganidzwa uye kutenderedzwa kweyakavimbika AI yekudzidzisa data. Ivo vane maturusi anodiwa avanoda mureza matambudziko, atarise, uye agadzirise iyo AI-based solution isati yatanga.
Human-in-the-loop AI chirongwa "chengetedzo mambure" iyo inosanganisa kusimba kwevanhu - uye kwavo kwakasiyana nekwesimba nekomputa simba remuchina. Kudyidzana kwevanhu neAI uku kunofanirwa kusimbiswa kubva pakutanga kwezvirongwa kuitira kuti data yakarerekera isaite hwaro muchirongwa.
2. Njere AI Inotarisira
Kuve nebasa kuve nechokwadi chekuti maAI masisitimu emahara ekurerekera uye kuti akadzika midzi muhunhu. Izvo ndezvekurangarira kuti sei, sei, uye kupi data inogadzirwa, kuti inogadzirwa sei neAI masisitimu, uye mashandisirwo aanoitwa mukuita sarudzo, sarudzo dzinogona kuve nehunhu. Imwe nzira yekuti bhizinesi riite kudaro kushanda nenharaunda dzisingamiriri kuti dzive dzakabatana uye dzisasarura. Mundima yetsanangudzo yedata, tsvagiridzo nyowani iri kuratidza maitiro emhando yeanoti-akawanda-akawanda-basa inobata mavara emumwe nemumwe seyakasiyana subtask inogona kubatsira kudzikamisa zvingangoitika mumaitiro echokwadi echokwadi nzira apo kusawirirana kweanotisi kunogona kunge kuri nekuda kwekumiririra uye. inogona kufuratirwa mukuunganidzwa kwezvidimbu kune imwechete pasi chokwadi.
Kuvimbika kunobva kubhizinesi kuve pachena uye kutsanangurwa mune madzidzisirwo eiyo AI modhi, mashandiro ayo, uye nei vachikurudzira zvabuda. Bhizinesi rinoda hunyanzvi neAI yenzvimbo kuitira kuti zvikwanisike kune vatengi varo kuita kuti maAI avo awedzere kusanganisirwa uye akasarudzika, achiremekedza akakosha nuances mumutauro wemuno uye zviitiko zvemushandisi zvinogona kugadzira kana kuputsa kuvimbika kwemhinduro yeAI kubva kune imwe nyika kuenda kune inotevera. . Semuyenzaniso, bhizinesi rinofanirwa kugadzira mashandisirwo aro emamiriro emunhu uye enzvimbo, kusanganisira mitauro, madimikira, uye mataurirwo mumashandisirwo ezwi. Nenzira iyo, app inounza yakaenzana nhanho yeruzivo rwenzwi kumutauro wega wega, kubva kuChirungu kusvika kumitauro isingamiriri.
Kurongeka uye Kusiyana
Pakupedzisira, kurangarira AI kunoona mhinduro kuti dzakavakirwa pane dzakaringana uye dzakasiyana data seti uko mhedzisiro uye mhedzisiro yemamwe mhedzisiro inoongororwa uye kuongororwa sarudzo isati yaenda kumusika. Nekurangarira uye nekubatanidza vanhu muchikamu chega chega chekuvandudzwa kwemhinduro, isu tinobatsira kuona maAI mamodheru anogara akachena, akarerekera zvishoma, uye ane hunhu sezvinobvira.
Tags: aichakagadzirwa njerekusarurabias data setikusasarura kwemasetivakarerekera databiased datasetsdatasetstsika aietsika artificial intelligencefairnessnzvimbogooglemitaurokufungarusaruragandasexismsexisthupfumi pamwe nehupfumikuvimba
Ahmer Inam ndiye Chief AI Officer we Pactera EDGE, inotungamira yepasirese digital uye tekinoroji services kambani. Iye ane ruzivo rweData uye Analytics Executive ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa mukutungamira shanduko yesangano achishandisa data, tekinoroji, masisitimu eruzivo, analytics, uye zvigadzirwa zve data.